Galmee ammaa keessatti, lakkoofsoota sarara dhangeessa, akkasuumas ida'a yk haqa. keewwata tokko lakkaawwii sarara irraa qoqqobuuf, keewwaticha keessa cuqaasiitii, Dhangi'i - Keewwata filadhu, caancala Lakkaawwii cuqaasi, kana booda saanduqa filannoo Keewwata kana lakkaawwii sarara keessatti dabali qulqulleessi. Akkaataa keewwata tokko lakkaawwii sarara irraa qoqqobuu nidandeessa.
Lakkoofsa sararaa dhangii HTML keessatti hinargamu.
Amalawwan lakkaawwii sararaa qindeessi.
Yoo orofaan lakkaa'uu tokko ol tahe, lakkoofsoota sarara gidduutti agarisisuuf, arfii foo'aa galchuu nidandeessa.
Foo'aawwannii, sararoota isa hin lakkoofsifamne keessatti qofa agarsiisama.
Keewwatawwan duwwaa yk sararoota goodayyaawwan barruu keessaa, kamiin akka lakkii fuulaatti dabaltu ifteessi.
Sararoota goodayyaawwan barruu keessaa
Barruutti lakkoofsawwan sarara goodayyaawwan barruu keessaatti ida'a. Lakkaawwiin, tokkoon tokkoon goodayyaa barruu keessaatti lamkaa'a. Lakkaawumsa sarara, bal'ina barruu guddaa keessaa kan galmichaa irraa qoqqobamaadha. goodayyaawwan koronyate keessatti, lakkaawwiin lamu hinka'u.
Fuula haaraa mara lamkaasi
Title is: Lakkaawwii Toorii